विकास, नारायण गोपाल ,आर्किमिडिज र प्रिय साथी
किर्तिपुरमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी पछाडि अवस्थित एउटा घरको एउटा कोठामा मधुर गीत बज्दै छ । संगीत कोठाको भित्ता भित्तामा ठोक्किएर गुन्जिदै छ । संगितको ध्वनी केही लिक पनि भइरहेको छ झ्यालबाट बाहिर । एउटा भौतिकशास्त्रको विद्यार्थी बुझन प्रयासरत छ भौतिकशास्त्रका सिद्धान्त । शब्दहरुमा जिवन्तता देख्न थालेको छ उसले । पहिले पहिले शब्दहरुमा ध्यान जान्थेन । केबल संगीतमा मात्र रमाउने काम हुन्थ्यो विकासको । आज नारायण गोपालको गीतले बिकासको मन सुम्सुम्याउँदै छ । “एउटा मान्छेको मायाले ......”
कोठामा एउटा खाट ,एउटा टेबुल ,एउटा कुर्सी ,एउटा ह्याङर ,एउटा झ्याल छ । उसको जीवनमा “एउटाको “ महत्व धेरै छ । जिवन पनि एउटै हो । पुनर्जन्ममा विश्वाश नगर्ने भौतिकवादी न हो रमेश । उसको हात भने बेलाबेलामा मोबाइलमा गैरहन्छ । उसको मोबाइल पनि एउटै छ । उसको मनप्रिय साथी पनि एउटै छ । उनको मेसेज आउँछ कि भन्ने प्रतिक्षामा छ । आज उसलाई पढ्ने मन त छैन। तर नपढी नहुने छ । पाना पल्टाउँदा ” आर्किमिडिजको सिद्धान्तमा “ आँखा पर्छ । खाना खाएर बसेको भएर होला ,लामो हाइ गर्छ । आँखा टल्पल हुन्छन् ...........। उनको ”हाइ ” को पर्खाइमा हुन्छ । छिनछिनमा इन्बक्स हेर्छ । तर आज पनि रित्तो हुन्छ ।
आज धेरै दिन बितिसकेको छ । दुई हप्ता भैसकेछ उसको मनप्रिय साथीसँग कुराकानी नगरेको । त्यसैले उ केही बेचैन छ । केही निरास छ । अचेल उनी निकै ब्यस्त छिन् । शायद त्यसैले होला विकासको मेसेज इन्बक्स रित्तो भएको । केवल नेपाल टेलिकमको रिचार्ज गर्ने निर्देशन मात्र ! आशा गर्छ आज मेसेज आउँछ कि भनेर । तर सुर्यास्तसङै उसको आशा पनि अस्ताउँछ ।
उसलाई आफ्नो जीवन पनि रित्तो अनुभुती हुन्छ आफ्नो मोबाइलको इन्बक्स जस्तै । केबल दैनिक जीवनका रेगुलर कार्यहरुमात्र । र बाँच्न चाहिने निर्देशन मात्र । भोकले खान निर्देशन । निद्राले सुत्न निर्देशन । जीवनचर्या चलाउन परिवार र समाजको काम गर्ने निर्देशन । एक किसिमले खल्लो दैनिकी भनुम् । उनले बाचा गरेकी थिन् । फुर्सद हुँदा सम्झिन्छु भनेर । त्यसैले आशामा मोबाइल हेरिरहन्छ बिकास । सतर्क रहन्छन् उसका कानहरु । मेसेजको टुङ्टुङ सुनिन्छ कि भनेर ।
धेरै खयाल गर्छ विकासले आफ्नो साथीको । उत्तिकै माया पनि गर्छ । बेलाबेलामा मेसेज पठाउने गरेको थियो “ टेके क्ययर डियर । ............. ” तर उनले भने सम्झिन छाडेकी हुन् कि जस्तो छ । आँफै सम्झिन्छु भनेर बाचा गरेकी थिन् । त्यसैले घरिघरि मेसेज गरेर डिस्ट्र्ब गर्न चाहँदैन ऊ । त्यही बाचाको आशामा बसेको छ बिकास । उनले फिल्टर गरेर बचेको समयमा सम्झिन्छिन् कि भन्ने आस अझै जिवित राखेको छ। सायद विकासको जस्तो मनोभाव उनको थिएन होला । विकास न उनको परिवार न उनको पहिलेदेखिको साथी । आज बल्ल बुझ्दै छ विकासले । त्यसैले बेचैन छ । यो बुझ्दै गरेको आभास हुँदा उसको मनमा चस्स हुन्छ । हृदयलाई सुम्सुम्याइरहेको गीतले अब घोच्न थाल्छ ।
विकासको कुलत भने छैन। । न सिगारको साथ न सोमरसको साथ । सिगारको साथ हुन्थ्यो त धुवाँ र संगितको ध्वनी १०० बर्ग फुटे सिलिङमा जुहारी खेल्थे होला । विकासको नसा भनेकै भौतिकशास्त्र । हालसालै नयाँ नसा थपिएर दुइटा नसा भएका थिए । एउटा साथीको नसा । र अर्को भौतिकशास्त्रको । दुई हप्तासम्म हुँदा पनि उनको नसाले छोडेको थिएन ।....... गीतको मधुर आवाज सुनिन्छ ” मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानीजस्तो ..........” । मुरीमुरी धन्यवाद दिन्छ मनमनै नारायण गोपाललाई । मिठा यथार्थपरक शब्दमा मिठो स्वरले जीवन दिएकोमा । विकाससँग त्यही संगीत त छ हिजोआज जिवनमा रङ भर्न ।
मनको गर्हौ भाव पन्छाउन सके हल्का हुन्छ । विकास यो कुरा बुझ्दै थियो । आशाका पोकाहरु मिल्काइदिए जीवन खुशी हुन्छ भनेर । मन चङ्गा हुन्छ । हुन त ठुलो आशा गरेको त हैन । केवल शुभरात्री शुभबिहानी । बेला बेला सन्चोबिसन्चोको मेसेज । र केही मिठा बात । मनको रेजोनेन्स मिलाउन खोजेको मात्र । उनको मनको आयातन फराकिलो भएको भए भावनाहरु फुट्बल खेल्थे होला । शायद ग्राउन्ड्मा प्रबेश नै हुन पाएन विकास । । उनलाई डिस्ट्र्ब गर्ने मन त थिएन विकासको । त्यसैले ऊ पर्खिन्छ । अर्को गीतको आवाज गुन्जिन्छ “ पर्खिबसेँ आउँला भनी ........”
आर्किमिडिजले बाथटबमा नुहाउँदा पानीमा हल्का हुनुको रहस्य पत्तो पाएका थिए रे । “युरेका “ भन्दै पागलजस्तै नग्न दौडेका थिए रे। नयाँ आबिष्कारको खुशीमा ।विकास उफ्रिन सकेन । दौडिन पनि सकेन । तर मनको तनाब र अशाहरु किनारा लगाउन सकेमा मन हल्का हुने कुराको अनुभुती गर्छ ।जति मनका कुराहरु पाखा लगाउन सकिन्छ त्यती नै जीवनयापन हल्का हुन्छ । भौतिकशास्त्रको जिवन्त प्रयोग । विकास त उनीसँग पेरिस जान चाहन्थ्यो । लेक्साइड घुम्न चाहन्थ्यो । पहिलोपटकको भेटमा नै रेजोनेन्स मिलेको अनुभव गरेको थियो । जन्मदिन बिशेष महसुस गरी मनाएको थियो उनको उपस्थितिले । मन देखि आभारी थियो अबिस्मरनिय साँझको लागि । आदि इत्यादि सम्झनाहरुले बिकासलाई काउकुती लगाइरहेको थियो। । सायद डोपामिन उसको शरीरमा बढेको थियो। उनलाई काउकुती नलाग्दासम्म न त भेट होला न त बात ! केवल दुई दिनको यादमात्रमा सिमित ।
यो सम्झिंदै गर्दा उसले एउटा औँठी निकाल्छ त्यही एउटा टेबुलको ड्रवरबाट । धातुले बनेको त्यो औँठीमा उसले आफ्ना मनका गाथा कैद गरेको थियो । उनीलाई मन पर्ने धातुको थियो त्यो । राशी अनुसारको धातु । स्‍मृतिको गहिरो तहमा लेखेको थियो एक दिन उसले । मार्केटमा सँगै हिंडेको बेला उनले खुशी हुँदै देखाउँदै गर्दा । त्यो बेलाको उनको अनुहारको चमक सम्झिँदा पनि मनै प्रफुल्लित बनाउने । प्रस्ट छ स्‍मृतिको एउटा बिशेष पानामा । त्यो सबै गाथा फुकाउने सोचमा थियो ।
भेट्ने इच्छा धेरैपटक जाहेर गरिसकेको थियो। तर समय मिलिरहेको थिएन त्यो उपहार दिन । उनी औधी ब्यस्त जो थिन् । उनी ब्यस्त हुँदै थिन् । बिकास अभ्यस्त हुँदै थियो । उनको उपस्स्थिती विना जीवन जिउन अभ्यस्त । बिकासका सबै अन्तर्मनका भावनाहरु अब सदैब कैद पो हुने हुन् कि ! मजाले फुकेर फिजारियोस् भन्ने मनमा इच्छा गर्छ । कैद भएको भावलाई सम्मान गर्ने तर ग्रहण नगर्ने उनको मनोभाव हुनुपर्छ भन्ने आत्म बोध गर्छ विकासले । औँठीलाई मुठ्ठिमा कस्छ । लामो सुस्केरा लिन्छ ।
मन सफा हुँदैमा गतिलो मान्छे मात्र भइने रहेछ । मनको साथी नहोइने रहेछ शायद ! फ्रायड बा ले पनि निचोड निकाल्न नसकेको नारी मनको बनावट भौतिकशास्त्रीले के बुझोस् । बिचरा बिकास ! त्यत्तिकैमा गीतको सूचिबाट अङ्रेजी गीत सुनिन्छ ” अई वान्ना ग्रो ओल्ड विद यू ..” । उसलाई मन पर्ने गीत हो यो । तर आज किन हो त्यो गीत फिका लाग्छ उसलाई । रिमोटको बटन थिच्छ गीत परिवर्तन गर्न ।
बिकास झसँग हुन्छ । आफ्नो टाउकोमा दण्डस्वरुप पिटेजस्तो गर्छ । भोलिको परिक्षाको तयारीमा भौतिकशास्त्रको सूत्रहरुमा ध्यानमग्न हुन्छ । ........ यथार्थबोध हुन्छ । उनिसँगको छोटो समयको संगतले पनि एउटा दिब्यज्ञान प्राप्त हुन्छ । आर्किमिडिजको सिद्धान्तमा गहन बुझाइ ।
पार्श्वमा ” ......आल अफ मि .............” अङ्रेजी संगीत गुन्जिदै छ । मनले उनको कुशलमंगलको कामना गर्छ विकासले । छिटो भेट होस् भन्ने इच्छा गर्छ । सम्झिन्छ आफ्ना रुमानी सम्झनाहरु । अनि एक क्षणमा सपनामा डुबुल्की मार्छ । उनी फर्किनन् आज सपनामा पनि । आफ्नो सपना पछ्याउँदै विकासको सपनामा आउने बाटो मोडिछ्न् होला । एक मन बिकासले सोच्छ मेसेज नगर्दा बढार्नुपर्ने धूलो हावाले उडाएर लगेजस्तै भए होला उनलाई । यो सोच्दा फेरी सोच्छ ” उनी त्यस्ती पटक्कै छैनिन् । उनी पक्का आउँछिन् । उनी इग्नोर गर्दिनन् । “
तर उनी ब्यस्तताले गर्दा सम्झिँन फुर्सद नमिलेको हो भन्ने कुरालाई तथ्य मान्छ । र चङ्गा हुन्छ । उनी आउँछिन् भन्ने अशा राख्छ । विश्वाश राख्छ । शान्त रेस्टुरामा फेरि भेट हुनेछ । बात हुनेछ । समयको घेराविना बात हुनेछ । कफी सेलाउने पनि छैन । फाट्ने पनि छैन। र उनलाई त्यो औठी दिनेछ । धेरै बोल्ने भएपनि सितिमिती नखुल्ने बिकास उनिसँग पूरै खुल्न चाहन्थ्यो । धेरै बोल्दैमा मान्छे खुल्दैन भन्ने सपाट उदाहरण हो बिकास ।
जे भएपनि दीपावलीको अवसरमा उनको सुस्वास्थ्य र उज्ज्वल भबिष्यको कामना गर्छ ।........ ” ..यो सम्झिने मन छ .......” । गीतहरुको सूची पनि सकिन्छ ।
स्वा ........ स्वा ........ ।
( बिकासप्रति समर्पित )
Dr Laxmi Panthy May 4, 2020 at 8:59 AM
Dherai khatra lekh